सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो, आयोग पनि तयारीमा लागेको छ : डा. राजन भट्टराई « Pariwartan Khabar
सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो, आयोग पनि तयारीमा लागेको छ : डा. राजन भट्टराई
30 December, 2020 3:58 pm
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताउँदै निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास दिलाएका छन् । यद्धपी संसद विघट्नविरुद्ध अदालतमा परेको रिटको विषय अहिलेपनि विचाराधिन रहेको उनले सुनाएका छन् ।
आज (बुधबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले भने,‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुभएको छ, वैशाख १७ र वैशाख २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सरकार तयारीमा रहेको छ । यद्धपी यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारािधन अवस्थामा छ । अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन् । सरकार पूर्ण रुपमा निर्वाचनको लागि तयारीमा छ । निर्वाचन गर्ने काममा छ ।’
चिनियाँ प्रतिनिधि नेपाल आउनुको मुख्य कारण भनेको नेपालको पछिल्लो अवस्था र नयाँ विकसित घट्ना बुझ्नु नै भएको उनको भनाई छ । उनले भने,‘उनीहरुले सबै दलका नेताहरुलाई भेटेर रिपोर्ट लिएर गए । निर्णय प्रक्रियामा तलमाथि गरेनन्, त्यसो गरेको भए त्यो हस्तक्षेप हुन्थ्यो । बुझ्नको लागि आउने कुरालाई अन्यथा लिईँदैन् ।’
नेताहरुले तल्लोस्तरमा उत्रिएर टिप्पणी गर्नु भनेको गलत भएको पनि उनको भनाई छ । उनले भने,‘नेताहरु किन यति धेरै हल्का भए ? तल्लोस्तरमा किन उत्रिएका ? भन्ने जनताको टिप्पणी छ । नेताहरुलाई भोलिको लागि ठाउँ राखेर बोल्नुहोस भनेर सुझाव दिन्छु ।’